Isan’ireo sekolim-panjakana manan-tantara ao an-toerana kanefa dia efa tena tola ireo fotodrafitrasa mandrafitra azy. Sahirana ihany koa ireo mpampianatra ao an-toerana izay mbola miankina amin’ny famatsian’ny ray aman-drenin’ny mpianatra ny ankamaroany na hoe FRAM. Nisy tamin’izy ireo no nitomany sy nitalaho mihitsy mba handraisana azy ho mpiasam-panjakana amin’izay satria efa ho 42 taona no naha FRAM ny sasany. Nilaza moa ny filoham-pirenena fa ho raisina mpiasam-panjakana avy hatrany izy ireo. Nanamafy ihany koa ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, Josoa Iaritsambatra Rijasoa Andriamanana, fa miisa 8000 ny fikasana ao anatin’ny tetikasan’ity minisitera ity handraisana izay mpanabe ho mpiasam-panjakana izay. Ankoatr’izay moa dia nanambara ny filoham-pirenena fa ovaina anarana amin’ny teny malagasy ity sekoly ity.